MUQDISHO, Soomaaliya - Maamulka Somaliland ayaa ka hadlay dacwaddii dhawaan dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya u gudbisay Gollaha Amaanka, kaasi oo kaga ashtakootey Saldhigga Militeri ee Dekedda Berbera.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Dr Sacad Cali Shire oo wareysi siiyay BBC-da ayaa sheegay in Dacwadda loo gudbiyay Gollaha Amaanka aysan waxba u dhimeynin Heshiisyada ay galeen iyo kuwa ay gali doonaan.
Wuxuu sheegay Wasiirka in Somaliland ay xaq u leedahay inay ka taliso dhulkeeda, Hawadeeda iyo Badeeda, islamarkaana ay tahay ay tahay sida uu hadalka u dhigay "dal madax-banaan."
Dr Sacad ayaa tilmaamay in Dacwadda dowladda Soomaaliya ay tahay mid nasiib darro ah, oo sii kala fogeynaysa labada dhinac oo u socday wadahadal kahad ku jira oo ay uga wada hadlayaan arrimada madaxbanaanida ay sheeganayso Somaliland.
Hadalka Wasiir Sacad ayaa kusoo beegmaya xilli habeen kahor uu Safiirka Soomaaliya ee Qaramada Midoobey Abuukar Cabdi Cismaan uu Gollaha Ammaanka u gudbiyay Dacwad ka dhan ah Imaaraaadka iyo Saldhiga Milateri ee Berbera.
Danjiraha ayaa ka codsaday Gollaha inay tallaabo ka qaadaan Imaaraadka, oo uu ku eedeeyay in Heshiis ay la gashay maamul ka dhisan Soomaaliya, taasina ay dhaawacaysa sharuucda caalamiga ah iyo madaxbanaanida dalka.
Maamulka Somaliland ayaa dhawaan joojiyay qorshe uu doonayay inuu dib loogu soo nooleeyo wadahadalladii ay kula joreen dowaldda Soomaaliya, kadib markii Xukuumadda Khayre ay sharci darro ku tilmaantay Heshiiska Saddex geedooska ah ee Dekedda Berbera.
Kulanka ayaa looga hadlay Su'aallo maamulka cusub ka qabo Heshiiska DP World...
Muuse Biixi oo ka hadlay warar sheegaya in Somaliland la midoobeyso Somalia
Somaliland 13.10.2018. 11:56
Mashruuca Injineer Yariisow oo sii huriyay xiisadda DF iyo Somaliland
Somaliland 02.09.2019. 09:43
Bayle oo sharaxaad ka bixiyey kulankii ay la yeesheen Muuse Biixi
Soomaliya 13.08.2019. 10:29
Khadar: Reer Somaliland way ku kala duwan yihiin fekerka kala tagga
Soomaliya 31.07.2019. 13:37
"Dalalkan danahooda eeganaya dhex uma noqon karan DF iyo Somaliland"
Caalamka 14.07.2019. 09:24